Masizigqaje ngolimi lwebele | isiZulu
Ama site/IZINHLELO >
isiZulu Ikhasi lasekhaya > Izindaba Zami
Masizigqaje ngolimi lwebele
Ngu: Vukile Nsibande
Ngingomunye wabantu abazigqajayo ngolimi lwami, okuyisiZulu.
Ngennhlanhla futhi isiZulu wulimi oludume kakhulu futhi olukhulunywa kakhulu eniNingizimu Afrika.
Kumina ulimi enye yezindlela echaza ubumina, nemvelaphi yami, ikhakhulukazi indlela engilukhuluma ngayo, nendlela engizizwa ngayo uma ngikhuluma ngalo, ayifani nendlela okwenzeka ngayo uma ngikhuluma olunye ulimi, ikhakhulukazi olwesiNgisi.
ENingizimu Afrika sinezilimu ezingu-11 ezisemthethweni kodwa sikholelwa ekutheni isiNgisi okuwulimi lwamaNgisi lwaseNgilandi ilona ulimi okumele silusebenzise uma sixhumana.
Umbuzo wami uthi, kungani kube ulimi lwesiNgisi kungabi olwesiNtu okuxhunyanwa ngalo?
Kungani sakhetha ukuqhakambisa ulimi lwangaphandle?
Mina ukuba ngempela kuyakhethwa, ngabe ngikhetha okungenani ulimu lwamaBhunu... isizathu yingoba lingulimu lwaseNingizimu Afrika akulona olwangaphandle.
Ngesonto eledlule, ngizibukele umabonakude, amazwe ase-Europe kwezebhola.
Ngayithanda indlela abakhuluma ngayo. Umuntu wayekhuluma ulumi lwakubo, ngisho ebuzwe ngesiNgisi wayephundula ngolimi azigqajayo ngalo, ulimi lwakhe lwebele.
Isizathu ukuthi bayakuqonda ukubaluleka kolimi, futhi bayazigqaja ngabayikho.
Awuke uhlale ubukele uma kuhlangene iPhalamende, uzongena uJacob Zuma uMengameli wezwe, ongumZulu phaqa, akhulume isilungu inkulumo yakhe aze ayiqede kwesinye isikhathi engafakanga ngisho uhlamvu olulodwa lwesiZulu.
Bese ngakolunye uhlangothi ubuke uma kukhuluma uHelen Zille, ukhuluma isilungu, hhayi ulimi lwesintu, ciche aze ayiqede inkulumo yakhe, ngisho sekukhuluma, abantu bolimi lwesiBhunu abasePhalamende, bakhuluma isBbhunu baze baqede izinkulumo zabo ngalo lolu limi.
Uma ubhekisisa kahle, umuntu ongumZulu noma umuntu omnyama uyathanda ukukhuluma ulimi okungelona olwakhe. Thina bantu abansundu siyathanda ukuhlale sicabangela abanye abantu ukuthi bazothini noma ngeke bezwe uma sikhuluma ulimi okungelona olwabo kodwa bona abayenzi leyo nto.
Kunalokho sigcina sithatheka kancane ngezinto zethu zesintu, zigcine zibonakala njengezinto ezingabalulekile.
Ngiyacabanga ukuthi namanje njengoba kuhlangene amazwe omhlaba eThekwini kwi COP 17, akekho owakuleli oseke wakhuluma ngolunye ulimi ngaphandle kwesiNgisi, yize bekhona otolika.
Sizwe esinsundu asike sizigqaje ngezilimi zethu, siziqhakambise ukuze nezinye izizwe ziyeke ukusibukela phansi.
Ngiyakholelwa ukuthi uma singakhombisa ukubaluleka kolimi lwethu ngeke ezinye izizwe zihlale zicabanga ukuthi isiLungu sabo kuphela esibalulekile, ukukhuluma olunye olimi kungubuciko kodwa akuchazi ukuthi umuntu uhlakaniphile noma ungcono kunabanye.
Asikhumbule ukuthi sonke sinelungelo lokukhuluma ngolimi lwethu lwebele.
Yini esingayenza ukulungisa le nkinga?– "Like" ikhasi lethu ku-Facebook uze ukwazi ukujoyina inkulumo ngolimi lwakho.– Landela IzindabaNews24 kuTwitter (@IzindabaNews24).Disclaimer: INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi eshicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24.
Email Twitter Google Facebook del.icio.us Digg Ad:
Sanlam Funeral Cover from R25p/m
News24 Sport24 Fin24 Channel24 Health24 Careers24 Women24 Wheels24 Food24 Parent24 isiZulu CityPress Kenya Nigeria Property24 Pricecheck OLX Travel Lotto
Ikhasi lasekhaya Terms Feedback